Media sy Fanoratan-gazety · Desambra, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Desambra, 2020
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Desambra, 2020
Eoropa Afovoany & Atsinanana 30 Desambra 2020
Ny filaminana no laharam-pahamehan'ny governemanta vaovao orogoaiàna… tsy iraharahiana ny fahalalahana maneho hevitra?
Orogoay 29 Desambra 2020
Toy ny kihondàlana ara-tantara no fisehon'ilay lalàna "Ley de Urgente Consideración" eny anatin'ny adihevitra ampahibemaso
Azia Atsinanana 24 Desambra 2020
密 (mitsu), amin'ny tranga sasany, dia midika hoe "mikatona, feno olona, na mirindrina."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Desambra 2020
Folo taona taorian'ny fitroarana niankina be dia be tamin'ny media sosialy hanesorana ireo mpanao didijadona manerana ny faritra, melohin'ny mpandala ny zon'olombelona ny fanilikilihan'ireo sehatra ny feo manivaka mbola mitolona hisian'ny fahafahana.
Shina 15 Desambra 2020
Karatra filalaovana mety manazava ny fiainana tao Japana nobodoina taorian'ny ady
Azia Atsinanana 14 Desambra 2020
Asongadin'ny karatra ntaolo ny tsy isalasalana ho endrika nisongadina indrindra rehefa vita ny ady tao Japana: ny miaramila amerikana.
Fialàna faobe nataon'ny mpanoratra an-gazetin'ny Hong Kong TV rehefa voaroaka ny 40 amin'ny mpiara-miasa amin-dry zareo
Azia Atsinanana 11 Desambra 2020
Notononin'ny famoaham-baovao ho antony ara-bola ny anton'ny fandroahana, filazana izay tsipahin'ny ekipan'ny efi-panoratana satria hitan-dry zareo ho politika no ao ambadika.
Pakistàna : vehivavy mikarakara hetsika nasiônaly ho setrin'ilay fanolànana nahavaky fo
Azia Atsimo 11 Desambra 2020
Nomarihan' ireo vehivavy nikarakara ny hetsipanoherana ny fandàvan-dry zareo ny fanantonana imasombahoaka, izay antso iray miverimberina ao Pakistàna isaky ny lasa lohateny vaventy anaty gazety ny tranga fanolanana
Pakistàna: mety ho voarara noho ilay lalàna vaovao ‘henjana dia henjana’ ireo sehatry ny media sôsialy
Niteraka fanakianana avy amin'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona sy ireo orinasa momba ny teknolojia ireo fepetra vaovao manome fahefana ny fanjakàna handrindra ny votoaty ety anaty aterineto sy handrara manontolo ireo sehatra sôsialy
Didim-pitsaràna tao Trinidad & Tobago manome alàlana ny fandroahana zaza Venezoeliàna tsy ampy taona
Karaiba 06 Desambra 2020
. Taorian'ny nandroahana hiverina an-tanindrazana ilay andiana Venzoeliàna, ary avy eo naverina tao Trinidad & Tobago, mpitsara iray avy ao amin'ny Fitsarana Antampony no namoaka didy hoe manana zo hampihatra ny lalàna anatiny ny fanjakàna